Mamitaha tanana amin'ny Photoshop. | Famoronana an-tserasera
Nanomana tutorial izahay hanome fiainana sy fanadiovana tanana iray izay tsy voakarakara tsara.
Manomboka amin'ny sarin'ny tànana kely tsy miraharaha isika. Miankina amin'ny endrika tsy firaharahiany azy io, dia handany fotoana bebe kokoa na latsaka isika, ary hiasa bebe kokoa na kely hanatsarana azy, saingy hiaraka foana amin'ny ny dingana mitovy.
Hifantoka amin'ny fantsika iray isika ary avy eo dia ho fampiharana ny fomba mitovy amin'ny fantsika hafa.
Raisinay ilay fitaovana ankalazaina avy amin'ny menio ankavia, ary amin'ny safidy dia amboarintsika mba tsy ho lehibe dia lehibe ilay borosy, ilay Range ho an'ny Midtone, ary ny Exposure be 13% na latsaka. Amin'ity fanaingoana ity dia mamaky ny fantsika tanteraka isika, tsy miverina sy miverina, indray mandeha ihany satria kely fotsiny no tadiavintsika hosasana amin'ny fantsika iray manontolo. Avy eo ataontsika kely kokoa ilay borosy ary ampitaintsika in-droa na intelo mihoatra ny sisin'ny fantsika, amin'ity tranga ity dia hanamaivana azy io, noho izany dia ho mihoatra ny indray mandeha.
Raha manana loko miloko mavokely na mavo mahery isika amin'ny faritra misy ny hoho, aza manahy, raisinay miaraka amin'ny loko fotsy ilay borosy ary amin'ny habe tena kely dia manao tsipika amin'ny sisin'ny fantsika isika. Avy eo dia mankany amin'ny menio izahay Sivana - Blur - Gaussian Blur, ary manome onja 3,7 eo ho eo isika. Isika dia mampihena ny hafangarony, eo anelanelan'ny 50 sy 70% ka tsy fotsy loatra, ary dia izay!
Azontsika atao foana ny maka tahaka ny fantsika amin'ny sary hafa ary mamolavola azy ho an'ny tenantsika, saingy mahafinaritra kokoa ny manandrana toy izany.
Azontsika atao koa ny manao a mahafotsy ny nify, araka ny nasehontsika fotoana lasa izay tao amin'ny lesona hafa. Ity teknika ity dia ampiasaina amin'ny "fanadiovana fotsy", fa tsy azo ampiharina fotsiny fantsika, nify, na maso, fa koa mba rindrina, na singa sasany avy any an-dakozia, efi-trano fidiovana, fandroana, maninona raha bisikileta na fiara hafa. Raharaha ny mitady zavatra amin'ny sary izay heverinay fa afaka "manadio" ary mampihatra an'io fomba io isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Mamitaha tanana amin'ny Photoshop.
Tena mahaliana. Mba hosorana ny fako taloha amin'ny sariko. ?